Fanazavàna teny malagasy laharana fahafito amin' ny volana malagasy. Ny anarany dia nalaina avy amin' ny anaran' ny antokon-kintana, izay ataon' ny Arabo hoe El-mizân (Balance).
Ny zaza teraka Adimizana dia ampitahirizina mizana, ary tsy mba avela hitafy lamba tohi-loha. Omby sada sy akoho maramara no manambina azy raha ompiany. [Ravelojaona 1937]
Fanazavàna teny anglisy The name of the seventh month in the Malagasy year. [Ar. Al-mizanu -- Libra.] [Richardson 1885]
Fanazavàna teny frantsay Nom de la septième lune et du septième mois de l'année malgache [Abinal 1888]
1 Tsy azo atao Adimizana ny famadiahana fa ampiady; [Rabesata: Fanandroana]
2 Ary tamy ny andro Talata 15 Adimizana, 19 Janoary. [Cohen-Bessy: Rakotovao]
3 Dia navoaky ny Mpanjaka tamy ny andro Alakamisy 5 Adimizana 31 Janoary 1884. [Cohen-Bessy: Rakotovao, takila 147]